Waxaa jira haween badan oo ku dhici jacayl la jiro ragga is qaba ahaa Colkiisa, halka qaar kale oo badan ula kac ah ka raadi nin guursaday badhaadhaha (lagusoo loogu tala galay) ahaansho ee nin farsamo un-heli karaa. Si kastaba ha ahaatee, su'aasha had iyo jeer weli sidii si haddii ay sax tahay in uu ku dhaco jacayl nin guursan?
Hoos nin guursan ekaan kartaa xaq u, gaar ahaan haddii nin leeyahay ay isku dareemaan sidoo. Waxaa intaa dheer, haweeneyda oo ay xaalad noocaas oo kale ah ka heli kartaa dareen been ah oo ammaanka in ninka ugu dhakhsaha badan sooci doonaa naagtii, si ay xiriirka u magooli kartaa kala go '. Si kastaba ha ahaatee, reer xamarku ah, in loo baahan yahay in la dumay gebi sababahan soo socda.
Haweenka waa in ay bartaan si ay isu ixtiraamaan
Nin la qoys aan marnaba awoodin inay bixiyaan qof dumar ah ku qanceen ka tahay dhisidda xiriir dhab ah u noqon doonaa. Xitaa haddii uu ninkaasi yahay waqti uu si is ogow iyada la daryeelka qaadashada, jeclahay, iyo hadiyado, Xaqiiqaduna waxay tahay, ma bedeli wax doono!
Noocan oo kale ah qof dumar ah oo sidoo kale isku dayaan in ay is geliyey kabo ninka naagtiisa. Sida ay u dareemi lahayd haddii qof dumar kale sidii oo kale iyaga? Haddii ay dhab ahaan is ixtiraamaan, markaas waa in ay fahmaan in waxa kaliya ee ay ku dhamaan sameeyo doonaa waa jabsada qoys, iyo in aan waa calaamad ah haweeney kasta uu doonayo in uu qabto, Waxaan rajeynayaa!
Ragga marna ka tegi doono Haweenkooda
Xitaa haddii nimanku ay ka gaareen iyo in ka badan gabyi mar kale in ay kala sooci doonaa Haweenkooda ugu dhakhsaha badan si ay u yeelan karaan xiriir dhab ah la jacaylkiisa cusub laga helay, weligii wax u dhacayaan. Haddii nimanku u heli haweenka oo ku heshiiyaan in ay xiriir la leedahay iyaga, oo og in ay leeyihiin qoysaska, markaas heli nimankii soo geliyey zone Raaxada. Xaaladdan, Waxa hubaal ah rabi doonaan inay camiraan-status quo, tan iyo markii aan Waxay Dooni inay ka tagaan qoysaskooda.
Ka fikir nin ee qoyska
Haweenka, hana u noqonin, hadayana! Ka hor inta aanad go'aansan in aad xiriir la leh ninka ay is qaba, xusuusan qoyska in yahay in lagu Halaagsamay. Xaaladdu way ka sii xumaan tii ay jiraan carruur ay ku lug. Carruurta ayaa waxa uu noqon doonaa kii ugu xumaa saameeyeen haddii nin ku go'aansato inay iyaga kaga tegi. Yeyna ee aadan i illoobin naagtii, kuwaas oo la baqayo yaabo in nolosha.
Haddii wax kale, markaas unit qoyska waa in qof dumar ah waa in aan si sax ah si ay u dhici jacayl nin guursan dhaadhiciyo.
Haweenku waa inay marnaba degaan ka yar ay u qalmaan
Waa maxay sababta dhulka, wuu diiday qurux a, waxgarad iyo smart dumar doonayaan inay xaliyaan nin oo aan laga geli karaa in xiriirka dhab ah, sababta keliya ninka guursato? Ma sida naag wanaagsan tahay in ay noqon raadinaya nin oo keliya in si buuxda loo huray in uu xiriir aan dhabta ah? Dumarku waxay u baahan ilaa toosiyaan iyo in ay naftooda iyo awoodooda in ay u soo jiitaan nin hal, la kuwaasoo ay wadaagi karaan xiriir la lahayn Xariga lifaaqan.
Waa caadi in la dareemo murugo ku saabsan jebinta buul jacaylka
Jacaylku waa mid ka mid ah dareenka ugu adag tahay in la xakameeyo. Sida ugu badan ee qof dumar ah oo laga yaabo inay si dhab ah oo qoto dheer nin guursan jecel, xaqiiqadu waxa ay tahay in xiriirka aan la sii jeeda meel kasta oo. Sababtan awgeed, waxaa fiican in ay joojiyaan si degdeg ah, halkii ka dib, si ay u hesho waqti ku filan oo ay bogsiiyaan kuwa. U hubso in aysan sahlanaan doonto dhamaan, laakiin waxa ay noqon doontaa u qalantaa in dhamaadka.
Ha lagu soo kulmiyey nafta ra'yiga dadka kale
Qof dumar ah ee xiriir la leh nin guursan lagu xukumi doonaa qaar kale oo ka dhan geesood. Naagtii ayaa u, sidaas, baahan yahay inuu xoog ku jebi la ninka sababtoo ah waa wax sax ah si ay u sameeyaan. Waxaa intaa dheer, waa u faa'iido haweeneyda si uu u siibo, si ay u awoodaan inay la kulmaan nin oo si buuxda loo geli karaa in uu xiriir aan.
Ha la xiriiri ninka sabab kasta
Marka qof dumar ah oo la nin guursan jebiyo, markaas waxaa lagama maarmaan ay tahay in la joojiyo nooc kasta oo xidhiidh la leh ninka. Haweeney waa in xitaa la beddelo lambar xiriir ah in la isticmaalo in aad la xiriirto inuu ninkaas la. Tani waxay noqon doontaa bilowga geedi socodka bogsiinta.
Qofna ma xakamayn karo oo isagu ama iyadu JECLAAN, Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la xasuusto in aysan ahayn mid sax ah si ay u dhici jacayl nin guursan. Dhinaca kale warka in, kuwa haweenka oo horey u jacayl la jiro ragga is qaba, xiligeedu ilaa nasasho!
Online Aasaasida profile haasaawe ka noqon kartaa kabixitaanka ah iyo fikrad argagaxsan oo dhan hal mar. farax The ...